Soo degso Boeing B-52 Stratofortress Alphasim FSX SP2 & P3D - Rikoooo
downloads 26 785
Alphasim & Steve Hess
La cusbooneysiiyay 03 / 11 / 2012: Dhexdhexaadinta qiiqa mootada ee lagu soo bandhigay maskax ahaan halkii ay horay u ahaan lahayd. Halkan waxaa ah Alphasim B-52 Bombardier oo wax laga beddelay FSX SP2 /P3D waxaa ku jira laba moodal B-52G iyo B-52H iyo lix dameer, waxaa sidoo kale ku jira xarig cajiib ah 3D cockpit (VC) iyo 2D dhawaaqyo dhaqameed loogu talagalay B-52. Riix Ctrl + W si aad ugu furato goobta bambo-gacmeedka iyo Shift + E ee shaqaalaha afduubayaasha ah (ka eeg buugga wixii faahfaahin dheeri ah). Waa mashiin aad u weyn waxaadna ubaahantahay ganaaxyo qaas ah, qaasatan hadii si buuxda laguugu xukumo kerosene. Waxay kujirtaa animations su sida co-pilot firfircoon, qiiq, baalal dabacsan iwm. Waxay leedahay moodal duulimaad sareeya oo wich waa mid macquul ah.
Boeing B-52 Stratofortress waa baaxad aad u ballaaran, subsonic, bomber istaraatijiyadeed oo jet ah. B-52 waxaa loo qaabeeyey oo dhisay Boeing, kuwaas oo sii waday taageerada iyo hagaajinta. Waxaa ka shaqeynayey Ciidamada Cirka Maraykanka (USAF) tan iyo 1950s. Bam-gacmeedku wuxuu ku socdaa xaddiga 70,000 (32,000 kg) ee hubka.
Laga bilaabo bilawga guusha gorgortanka ee June 1946, naqshada B-52 waxay ka soo baxday diyaarad toos ah oo ay ku shaqeeyeen lix turboprop mashiinno ugu dambeyntii YB-52 oo leh sideed injineer oo turbojet ah iyo baalal duub. B-52 waxay soo qaadatay duulimadeeda gabdhaha ee April 1952. In la dhiso hubka nukliyeerka ee hawlgallada dagaalka qabow ee qaboobaha, B-52 Stratofortress ayaa beddelay Mawduuca B-36. Inkasta oo uu ahaa askari ka mid ah dagaallo dhowr ah, Stratofortress ayaa hoos u dhigay ciidan dabiici ah oo dagaal ah. Magaca Stratofortress waxaa si dhif ah loo isticmaalaa meel ka baxsan goobaha rasmiga ah; waxaa loo gudbiyay shaqaale ciidan sida BUFF (Fatxi Cunto / Flyer Fucker / Fellow).
B-52 waxay ku jirtay adeegyo firfircoon USAF tan iyo 1955. Bambaanooyinka ayaa hoos imaanayay Istaraatijiyadda Xeeladda Istaraatiijiga ah (SAC) ilaa laga soo saaro 1992 iyo Diyaaradaheeda oo ku soo duulay Taliska Dagaalka Cirka (ACC); 2010 dhammaan B-52 Stratofortresses ayaa laga soo wareejiyay ACC ilaa Taliska Cadaalada Global Force (AFGSC). Waxqabadka sarreeya ee xawaaraha sare iyo kharashka hawlgalku aad u hooseeyo waxay ku hayaan adeega B-52 inkastoo ay soo ifbaxday diyaaradaha dambe, oo ay ku jiraan in la joojiyo Machadka NMXX North American XB-3 Valkyrie, oo ah jaantuska Rockwell B-70B Lancer, iyo Nafaqada Northrop Grumman B-1. B-2 wuxuu ku calaamadiyey sannad-guuradii 52 ee adeegga joogtada ah ee shaqaalaheeda asalka ah ee 50 ka dibna dib loogu soo celiyo 2005 iyo 2013 waxay u adeegi doontaa 2015s. (Wikipedia)
Author: Alphasim & Steve Hess
Boeing C-32 Air Force Labo USAF FSX & P3D
Boeing 767-300 laba iyo toban dib u celin FSX & P3D